Farmaajo “Dadka Gaalkacyo Waxaa Lagu Kala Qeybiyay Siyaasaddo Hoose”: DHAGEYSO | Gaaloos.com
Home » News » Farmaajo “Dadka Gaalkacyo Waxaa Lagu Kala Qeybiyay Siyaasaddo Hoose”: DHAGEYSO
Farmaajo “Dadka Gaalkacyo Waxaa Lagu Kala Qeybiyay Siyaasaddo Hoose”: DHAGEYSO
Madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka Somalia, Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa ka hadlay markii ugu horeysay dabaal degyadii shacabka Soomaaliyeed ay kusoo dhoweeyeen guushiisa, waxaana la weydiiyay dabaalgihii shacabka Gaalkacyo oo colaadi u dhaxeysay ay si wada jir ah ugu dabaal degeen.
Farmaajo oo la hadlayay Idaacadda VOA ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Gaalacyo ay yihiin dad walaalo ah oo waxba aan ku kala duwaneyn, laakiin siyaasado hoose oo meel fog jirin lagu kala qeybiyay.
“Horta, taasi waxay muujineysaa dadka Soomaaliyeed waa dad walaalo ah, waxbana aan ku kala duwaneyn, laakiin siyaasaddo hoose oo aan meel fog jirin lagu kala qeybiyay, runtiina dadkaani nabad rabaan, wada noolaansho u baahan yihihiin” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo oo aan sheegin cidda siyaasadda hoose ku kala qeybiyay bulshada Gaalkacyo ee Koonfurta iyo Waqooyiga.
Magaalada Gaalkacyo ayaa bilihii lasoo dhaafay waxaa dagaallo soo noqnoqday ku dhex maray ciidamo kala taabacsan maamulada Galmudug iyo Puntland, heshiisyo dhowr ah oo la dhex dhigayna guuldareysteen.
Dhanka kale, madaxweyne Farmaajo ayaa shacabka iyo ciidamada ku wargeliyay in waqtigii dabaaldega uu dhamaaday, una soo jeestaan waqtigii shaqada ee dowladda ay ka rabto inay qabtaan,
la isuna diyaariyo dib u dhiska dalka iyo in lagu soo celiyo dalka nabadgelyadiisii horay u lahaan jiray.
Title: Farmaajo “Dadka Gaalkacyo Waxaa Lagu Kala Qeybiyay Siyaasaddo Hoose”: DHAGEYSO